राजस्थानविरुद्ध आज सन्दीपले मौका पाउने प्रबल सम्भवना – Paluwa Khabar
अषोज २८, २०७७ बुधबार 96
काठमाडौं, २८ असोज : आईपीएलको १३ औँ सिजन अन्तएगत आज दिल्ली क्यापिटल्स र राजस्थान रोयल्स खेल्दै छन् । दिल्ली र राजस्थानबीचको खेल साँझ ७ः४५ बजेदेखि सुरु दुबईमा सुरु हुनेछ ।
दुबै टिमको यो आठौँ म्याच हो । दिल्लीले सात खेलमा २ मा हार र ५ खेलमा जित हासिल गरेको छ । राजस्थानले ७ मध्ये तीनमा जित र चार खेलमा हारको सामना गरेको छ ।
जारी आईपीएलमा दिल्ली राम्रो लयमा देखिएको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा टिमका महत्वपूर्ण सदस्य घाइते भएपछि दिल्लीलाई केही असर पर्ने देखिन्छ । टिमका स्टार स्पिनर अमित मिश्रा र वीत्र गतिका बलर इशान्त शर्मा चोटका कारण लिगबाटै बाहिरिएका छन् ।
साथै, टिमका अर्का महत्वपूर्ण सदस्य ऋषभ पन्त पनि घाइते छन् । यी खेलाडीको अनुपस्थितिमा दिल्लीले लय गुमाउने सम्भावना पनि छ । मुम्बईविरुद्ध दिल्लीले हार ब्यहोरेकाले आजको खेलमा दिल्लीको अन्तिम-११ मा केही परिवर्तन देख्न पाइने सम्भावना छ ।
मुम्बईविरुद्ध दिल्लीले ऋषभ पन्त र शिमरोन हेटमायरलाई विश्राम दिँदै एलेक्स क्यारी र आजिक्य रहाणेलाई मौका दिएको थियो ।
राजस्थानविरुद्ध सन्दीपको सम्भावना कति?
यूएईका मैदान स्पिनर अनुकूल भइरहेकाले राजस्थानविरुद्ध दिल्लीले तीन स्पिनरलाई पनि मैदान उतार्न सक्छ । यसो भएमा दिल्लीमा आवद्ध नेपाली लेगस्पिनर सन्दीपले प्लेइङ ११ मौका पाउन सक्छन् ।
गएराति सम्पन्न खेलमा यही मैदानमा चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)ले सनराइजर्स हैदरबादविरुद्ध रवीन्द्र जडेजासहित तीन स्पिनरलाई खेलाएको थियो । सन्दीपले यसअघिका सात म्याचमा पनि प्लेइङ-११ मा मौका पाएका थिएनन् ।
उनी लगातार तेस्रो पटक दिल्लीमा जोडिएका छन् । उनलाई दिल्लीले प्लेइङ-११ मा मौका नदिएको भन्दै सन्दीपका समर्थक दिल्लीप्रति आक्रोशित पनि भइरहेका छन् ।
दिल्लीले जारी सिजनको सुरुवातका सात म्याचमा विदेशी खेलाडीको रूपमा मार्कस स्टोइनिस, कागिसो रबाडा, एनरिक नोर्खिया र शिमरोन हेटमायरलाई खेलाएको थियो ।
Prevदक्षिणकाली माताको दर्शन गरि पढ्नुहोस् आज असोज २८ गतेको राशीफल
Nextनेपाल तरुण दल सानीभेरि गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ओलि निर्वाचित
कुनैबेला खान नपुग्ने तपाईले दुबईका बैंकमा कसरी ४१ अर्ब राख्नुभयो प्रचण्ड? – प्रकाण्ड
साह्रै दुखद खबर : टिपरको ठ’क्क’रबाट १८ वर्षीया अन्सु शिवाकोटीको मृ’त्यू !